Fiteny amharika - Wikipedia
Ny tavoahangy Coca-Cola soratana amin'ny teny amharika
Ny fiteny amharika dia fiteny ao amin' ny vondrom-piteny semitika tenenina any Etiopia. Izy io dia fiteny semitika faharoa amin' ny lafin' ny isan' ny mpiteny, eo aorian' ny fiteny arabo. Noho ny pôlitika mikasika ny fiteny talohan' ny fahalatsahan'ny Defg, ampiasain' ny ankabeazan' ny mponina any Etiôpia ilay fiteny, ary ny mpiteny azy ireo dia na mampiasa azy amin' ny maha fitenin-dreny na maha fiteny faharoa nianarana na fiteny ampiasaina eny ivelany azy. Any Etiôpia, fiteny ampiasaina amin' ny fandraharahana ny fiteny amharika.
Tsy manana sata ôfisialy intsony ny fiteny amharika tamin'ny firenena nampihatra ny Lalampanorenan'ny 1994, nanambara ny andininy faha 5-1 fa mitovy sata avokoa ny fiteny tenenina ao Etiôpia. Kanefa ny andininy faha 5-2 dia milaza fa teny fiasan' ny governemanta federaly ny fiteny amharika.
Any ivelan' i Etiôpia, ny fiteny amharika dia tenenin' ny mponina miisa 2,7 tapitrisa miaina any Ejipta, any Israely, any Jibotia, any Iemena, any Sodàna, na koa any Soeda (tenenin' ny mponina vitsivitsy, matetika avy any Etiôpia ny ankabeazan' izy ireo) na any Eritirea ho an'ireo izay mbola niaina tambanin' ny fandraharahana Etiôpiana talohan'ny taona 1993.
2 Fanoratana ny fiteny amharika
Ny soratra voalohany amin'ny teny amharika dia nosoratana tany amin'ny taonjato faha-13 tany ho any.
Fanoratana ny fiteny amharika[hanova | hanova ny fango]
Ny fiteny amharika dia soratana amin'ny alàlan'ny abigida avy amin'ny fiteny gezy.
Fafana maneho ny abgida anoratana ny fiteny amharika
Ny fiteny amharika eo amin'ny Omniglot.com
Ny fiteny amharika ho an'ireo izay mahafehy ny fiteny frantsay
Lexiques de langues du français vers l'amharic Archived Febroary 16, 2010 at the Wayback Machine
Clavier en ligne en Geez
Raki-bolana sy loharanon-karena amin'ny fiteny amharika
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_amharika&oldid=1019280"
Voaova farany tamin'ny 11 Aogositra 2021 amin'ny 23:53 ity pejy ity.